जनजातिमा बहादुरको अग्रता, एक मतले चीनकाजी पछि परे - नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन २८, २०७२-नेपाली कांग्रेसको जारी मत गणनामा आदिवासी जनजाति सिटमा ६ सय मत गणना हुँदा बहादुरसिंह लामाले अग्रता लिएका छन् । उनले २४२, चीनकाजी श्रेष्ठले २३७ मत पाए । महादेव गुरुङले १९७, कल्याण गुरुङले १९५, आङगेलु शेर्पाले १७२ र तुलसी सुब्बा १५० मत पाए ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यको मतगणना सुरु भएकाे छ । बुधबारदेखि सुरु गरिएको मतगणना आज पनि जारी रहने निर्वाचन अधिकृत धर्म खनालले बताए ।
उनका अनुसार हिजो रोकिएको खुल्ला २५ तर्फका सहित आरक्षणतर्फका महिला, दलित, मधेसी र जनजातिको पनि मतगणना कार्य सुरु भएकाे छ ।
कांग्रेसको खुला २५ सिटमा बिहीबारसम्म चार सय तीन मत मात्र गणना भएको छ । त्यसमा खुमहादुर खड्का अग्रस्थानमा छन् । पार्टीभित्र छुट्टै समूह बनाएका खड्का र तत्कालीन महामन्त्री प्रकाशमान सिंहबीच पहिलो नम्बरमा रहने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । कहिले खड्का त कहिले सिंह अघिपछि हुने गरेका छन् ।
खड्का नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा र सिंह रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको प्यानलबाट निर्वाचन लडेका हुन् । हालसम्मको मतगणनामा बढी मत ल्याएका २५ जनामा देउवा प्यानलका १४ र पौडेलका ११ जना छन् । डा. शेखर कोइराला, प्रदीप पौडेल, प्रदीप गिरी, बालकृष्ण खाँड, विमलेन्द्र निधि, महेश आचार्य, रमेश लेखक र पूर्णबहादुर खड्का अग्र १० स्थानमा छन् ।
२५ भित्र आउने नयाँ अनुहारमा पूर्वमन्त्री रमेश लेखक, नेविसंघका पूर्वअध्यक्षहरू प्रदीप पौडेल र विश्वप्रकाश शर्मा मात्र छन् । अरू सबै यसअघि केन्द्रीय सदस्य भएकाहरू नै छन् ।
१२ औं महाधिवेशनमा आरक्षण कोटाबाट निर्वाचित महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना), सूर्यमान गुरुङ र धनराज गुरुङ यसपटक खुला २५ बाट प्रतिस्पर्धामा छन् । डिना महिला र गुरुङद्वय आदिवासी जनजाति कोटाबाट १२ औं महाधिवेशनमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुन् । धनराज खुला २५ मा चौधौं स्थानमा देखिएका छन् ।
सूर्यमान गुरुङ २५ भित्र पर्न सकेका छैनन् । खुला २५ बाट निर्वाचन लड्ने महिला नेतृमा सुजाता कोइराला र डिना मात्रै हुन् । सुजाता १६ औं स्थानमा छिन् भने डिना २६ औं स्थानमा । पूर्वमन्त्री एनपी सावद २५ औं नम्बरमा छन् ।
२५ भित्र पर्नेहरूमा लेखक, शर्मा, रामशरण महत, धनराज गुरुङ, प्रकाशशरण महत, सुजाता कोइराला, केबी गुरुङ, शंकर भण्डारी, गोपालमान श्रेष्ठ, बलबहादुर केसी, मीनेन्द्र रिजाल, चन्द्र भण्डारी, नारायण खडका, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बद्री पाण्डे र सावद छन् ।
यसअघि केन्द्रीय सदस्य रहेका पद्मनारायण चौधरी, मनमोहन भट्टराई, सूर्यमान गुरुङ २५ भन्दा पछि छन् । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट, पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी र लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे पनि २५ भन्दा धेरै पछि परेका छन् ।
›नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन
थप केही नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनबाट
कुन प्रदेशमा को अगाडि ? (अपडेट)चैत्र १, २०७२पूरा पढ्नुहोस्
४ लाख ७० हजारको माझबाट छानिंदै कांग्रेस नेतृत्वफाल्गुन २९, २०७२पूरा पढ्नुहोस्
प्रदेशको नतिजा पनि सार्वजनिकचैत्र १, २०७२पूरा पढ्नुहोस्
खुलातर्फका २५ केन्द्रीय सदस्यको टुंगो लाग्योचैत्र १, २०७२पूरा पढ्नुहोस्
२७ सय ५० मत गणना हुँदा शेखर कोइराला अगाडि (अपडेट)फाल्गुन ३०, २०७२पूरा पढ्नुहोस्
महिला आरक्षणमा ६ जना निर्वाचितफाल्गुन २९, २०७२पूरा पढ्नुहोस्
जनजाति कोटामा चीनकाजी, बहादुर र कल्याण विजयीफाल्गुन २९, २०७२पूरा पढ्नुहोस्
कांग्रेसको प्रदेश केन्द्रीय सदस्यको मत कति ?फाल्गुन २९, २०७२पूरा पढ्नुहोस्
फेरि खुमबहादुर अगाडि बढेफाल्गुन २९, २०७२पूरा पढ्नुहोस्
मधेसी पुरुष र मधेसी महिलातर्फ को–को अगाडि ?फाल्गुन २८, २०७२पूरा पढ्नुहोस्